डिआइजी सिलवाल र गायक श्रेष्ठ एमाले प्रवेश | Ekhabar Nepal
राजनीति असोज २० २०७४ .
नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल र चर्चित गायक सञ्जय श्रेष्ठ एमाले प्रवेश गरेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुद्धनगरस्थित क्यालिटी बैंक्वटमा उहाँहरुसहित बिभिन्न पार्टी छाडेर आउनेहरुलाई टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो ।
डिआइजी सिलवालले सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णय र कारवाहीपछि पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । राजिनामा दिएपछि उहाँ एमालेका कार्यक्रमहरुमा देखिदै आउनुभएको थियो । पार्टी प्रवेश गर्दै सिलवालले आफुमाथी राजनीति हुन थालेकाले आफुनै राजनीतिमा आएको बताएका छन् ।
गायक श्रेष्ठ भने राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । गायक श्रेष्ठसहित राप्रपाको ठूलो समुह एमाले प्रवेश गर्यो ।
पार्टी प्रवेशमा के भने त सिलवालले (सम्पादित अशं)
राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न सक्नु भएन भने राजनीतिले तपाईको जिवन हस्तक्षेप गरिदिन्छ । यो समयको अन्तरालमा मेरा जिवनमाथी धेरै ठुलो राजनीति भयो । सामाजिक संजालमा पछिल्लो समय मेरो एमाले प्रवेशका बारेमा धेरै टिकाटिप्पणी भएका छन्, राजनीतिमा आउनका लागी म प्रशिक्षित व्यक्ति थिइन्, मुलुकको जिम्मेवार सस्थामा महत्वपूर्ण योगदान दिएर मुलुकप्रति जिवन समर्पित गरेको सिपाही हु तर, राजनीतिले एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदियो, मैले राजनीति नअंगाल्ने हो भने मेरो अस्तित्वमाथी प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिने भो । मेरो अस्तित्व जोगाउनका लागी यहा आएको हु । मैले हिजो मुलुकका लागी जुन योगदान दिए, आज त्यसको फोरम मात्र चेन्ज भएको छ, तर, मुलुकमाथीको मेरो समपर्ण कदापी कम हुने छैन बरु अझै बढ्ने छ ।
राज्यले अन्याय गरेपछि अदालत गएको हु !
राज्य भनेको अभिभावक हो, राज्यले आफ्ना नागरिकमाथी बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्दछ । तर, जुन म माथी भएन । कसैले भने तपाई किन राज्यका विरुद्ध अदालत जानु भयो, संविधानले नै भनेको छ तिमीमाथी अन्याय भयो भने अदालत जान पाउछौ, त्यसैले के मैले न्याय माग्न अदालत जानु अन्याय हो । मुलुकमा अन्यायमा परेका धेरै पात्र छन्, जसको प्रतिनिधि पात्रका रुपमा म यहा उभिएको छु । अन्यायमा परेका व्यक्तिका विषयमा बोल्ने एमाले मात्र यस्तो एउटा पार्टी हो, त्यसैले यसमा आवद्ध हुन सबैलाई अपिल गर्दछु ।
राजनीतिमा जाने भए किन एमालेमा त ?
एमालेको जुन आर्दश, भिजन र सोच छ र एमालेले जुन दिशा दिएको छ मुलुकलाई, ऐतिहासिक व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरुले लिड दिनु भएको पार्टी हो, यहा पछि पछि हामी जस्ता मुलुक र देशको लागी केही गरु भन्नेहरुका लागी संरक्षण दिएको छ । यहा यस्ता पार्टी पनि छन्, जुन भन्दा लोकतान्त्रिक भन्छन् तर व्यवहारमा त्यो कतै छैन । तर यो पार्टी एकदम लोकतान्त्रिक रहेको छ । एमालेले मात्र समाजवादको बैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्छ ।
मान्छेले उत्ताद्र्धमा ३ कुरा सोच्छ रे, के मैले जिवन बाचे त, के मैले जिवन र मेरो राज्यलाई माया गरे त, मैले गर्ने कतव्र्य र उत्तरदायित्व पुरा गरे कि गरिन्, र मैले यो तीनवटै प्रश्नको जवाफ खोज्ने सिलसिलामा एमालेमा प्रवेश गरे । यहा यी सबै प्रश्नको उत्तर पाउने ठाउ छ ।
युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिई देशको विकास गर्नुपर्छ !
यो मुलुक हाम्रो हो, हामी यो मुलुकको विकासका लागी सबै एकजुट भएर जानुपर्छ, जुन अब हामी गरेर देखाउने छौ । एमाले मात्र यस्तो पार्टी हो जसले देशको विकासका लागी नया दिशा दिन सक्छ । जो आशाको केन्द्र हो, अहिले वार्षिक ५ लाख युवा बाहिरिने गरेका छन्, रेमिट्यान्सबाट जिडिपीमा २९ दशमलव ५ प्रतिशत रेमिट्यान्सले योगदान दिएको छ, तर यो सुखद कुरा होइन, सुखद त त्यो हो, कि ति युवालाई स्वेदशमै रोजगारी दिन सकियोस् । त्यसका लागी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नुपर्छ, कृषिमा, पर्यटनमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, जलस्रोतमा अपार सम्भावना छन् त्यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ हामीले । मुलुकलाई समृद्ध राष्टका रुपमा लिएर जानुपर्छ, यसमा नेकपा एमालेको जुन योजना, दृष्टिकोण छ त्यसमा म एउटा कार्यकर्ताका रुपमा योगदान गर्दछु । हिजो म मुलुकको एउटा इमान्दार सिपाहीको रुपमा काम गरिरहेको थिए भने आज नेकपा एमालेको एउटा इमान्दार सिपाहीको रुपमा काम गर्नेछु ।